UNksz Shongani Dladla osanda kuklonyeliswa ngeNdondo ephezulu Yezobuholi Obukhethekile e-UKZN.
Umfundi Wezemfundo Uklonyeliswe Ngezindondo Ezivelele
UNksz Shongani Dladla, ongumfundi owenza unyaka wesithathu weziqu kwezeMfundo uyaziqhenya emva kokuklonyeliswa ngeNdondo ephezulu Yezobuholi Obukhethekile e-UKZN, lendondo ehlomulisa futhi ehlonipha abafundi abaphumelele ngamalengiso ezifundweni zabo futhi abazibandakanya ngokuqavile emphakathini noma ezinhlelweni zenyuvesi njengoba kubaluliwe embonweni, izinjongo nemigomo yeNyuvesi.
Usanda kuhlonishwa ngobuciko bakhe kwezezinkondlo ngabeSakha Isizwe Ngomuntu Wesifazane Global Organisation (SINW).
UDladla, ongowokudabuka eNkandla uthe, 'Zombili lezi zindondo ziqinisekisa ukuthi ngiletha izinguquko ezimpilweni eziningi. Umndeni wami, ikakhulukazi umama wami, uyangeseka futhi uyaziqhenya kakhulu ngami. Ngaso sonke isikhathi ungumuntu wokuqala engimshayela ucingo uma ngizinendaba ezingijabulisayo. Selokhu ngangesaba ukujabulela impumelelo yami kodwa sengifunde ukuthi ukujabulela ngisho nencane impumelelo oyifezile kungaba yintshisekelo komunye umuntu.'
UDladla kwadingeka udlule ezihibeni eziningi ukuze afinyelele lapho ekhona namuhla. Udaba lwempilo yakhe lumayelana nethemba kanye noshintsho lwangempela njengoba evela endaweni eyayikade incishwe amathuba ngaphambilini futhi ekhuliswa umzali oyedwa.
'Kwabanye abafundi, ngithi ababe nogqozi ngemisebenzi abayikhethayo. Zamukele izinselelo zakho ngoba zizokuphoqa ukuba ube umuntu ongcono. Thola amandla ezintshisekelweni zakho futhi usebenzise lokho ukuze uzikhuthaze lapho sekwenyukela. Qhubeka usebenzele ukufeza umgomo wakho. Ngoba ngelinye ilanga uyothi lapho ubheka emuva uziqhenye ngenqubekela phambili oyenzile,' esho eluleka abanye abafundi.
Amagama nezithombe: Nkululeko Mbatha
I-CCS Ikhangise Ngefilimu Engempilo Yabafundi Abansundu EmaNyuvesi ase-SA
CAPRISA Researchers Listed Among World’s Most Highly Cited Researchers
UKZN Scoops MACE Excellence Awards
Water Sanitation Specialist Group Deputy Chairmanship for UKZN Academic
I-"Waste to Art" Yethula Umbono Wekusasa Elizinzile
Kukhulunywe Ngekusasa le-SA Engqungqutheleni Yohulumeni Basekhaya
GSB&L Academic Delivers Keynote Address at York
School of Engineering Top Academic Staff & Students Honoured
Professor Emeritus Status for UKZN Alumnus and Former Social Work Academic